Xa uthengisa into esuka kwisitolo sethu, njengenxalenye yentengo yokuthenga nokuthengisa, siqokelela ulwazi oluthile olusinika lona njengegama lakho, idilesi kunye nekheli le-imeyile.
Ukuba sicela ulwazi lwakho olusisiseko sesibini, njengentengiso, siza kukubuza ngokucacileyo imvume yakho, okanye sikunike ithuba lokuthi cha.
Ukuba emva kokungena kwakho, utshintshe ingqondo yakho, unokurhoxisa imvume yakho ukuba siqhagamshelane nawe, ngokuqokelela okuqhubekayo, ukusetyenziswa okanye ukwaziswa kolwazi lwakho, nangaliphi na ixesha, ukunxibelelana nathi
Ukuze uqonde ngakumbi, ungaphinda ufune ukufunda iMigomo yeNkonzo ye-Shopify apha okanye iSitatimende seMfihlo apha.
Ngokukodwa, khumbula ukuba ababoneleli abathile bangabakho okanye baneendawo ezikhoyo kummandla ohlukileyo kunokuba wena okanye nathi. Ngoko ukuba ukhetha ukuqhubeka nokuthengiselana okubandakanya iinkonzo zomniki-wesevisi wenkonzo yesithathu, ngoko ulwazi lwakho luya kuthotyelwa kwimithetho yegunya (s) apho umniki-nkonzo okanye izibonelelo zalo zikhoyo.
Ukuba usinikezela ngolwazi lwekhadi lakho lesikweletu, ulwazi lufakwe ngekhowudi usebenzisa iteknoloji yekhompyutha ekhuselekile (SSL) kwaye igcinwe nge-AES-256 encryption. Nangona kungekho ndlela yokudluliselwa kwi-intanethi okanye ukugcinwa kwekhompyutha kugcinwe i-100% ekhuselekileyo, silandela zonke iimfuno ze-PCI-DSS kwaye siphumeza umgangatho ophezulu owamkelekileyo wemveliso yecandelo.
Nolu uluhlu lweekhukhi esisebenzisayo. Sibahlule apha ukuze ukhethe ukuba ufuna ukuphuma kwiikhukhi okanye kungekhona.
ICANDELO 8 - UTSHINTSHA KWENQUBOMGOMO YENKCAZO
Ukuba ungathanda ukufikelela: ukuchaneka, ukulungiswa okanye ukucima nayiphi na inkcazelo yomntu esinaye malunga nawe, ubhalise isikhalazo, okanye ufuna nje olunye ulwazi uqhagamshelane nathi